Ninkii Ibliiska ahaa, aya igu akhriyey in lay ogandoona, aabo iyo hooyo marka ay arkan walaashey oo isku dhexyaacsan in layga garaci doono~!
Waxay yirahdeen ayagoo abaalmarin iiga dhigayo: “Waxas kaa rag ah, laga bilaabo maanta adiga ayaa kooxda amiir u ah, qof kaa dabo hadli karo majiro, adiga na amraysid, nagana reebeysid! Taajka adiga ayan kusaarney, hadalkada hadal kama danbeeyo!”
Habeynkii, bartii ayaan saaxanay; waaga marki uu baryeyna , cabsi ayaa iqabatey iyo wal-wal kusabsan wixii aan gaystey!
Kooxdii ayaa isku dayday inay ii niyad qaboojiso ayagoo leh: Gacan ban kugu siinayna sidii lagu daaweynalaha, lasoco daaweynta miraha waa sahal, waxba hakawal-walin, iska dhig nin rag ah!
Markii aan guriga kasoo maqanahey labo maalmood ayuu aabehey iweydiyo dadka meesha aan jiro. Aniga, waxan diyaar u ahey waxkasta oo laygu sameeyo dil, aflagaado, xabsi iyo in waxkasta oo ladoono!
Waxan direy qaar kamid ah groupka bal si’ay usoo eegan xaalada guriga sida ay tahey; waxay igu soo war celiyeen inay wax waliba caadiyihiin oo wax dhibaato ah kajirin!
Gurigi ayaan aadey anigoo diyaar u ah waxkasto oo laygu sameeyo. Sidii aan filayey, aabehey ayaa idiley, ayadoo hooyadey iyo dhamaan dadkii kalana ay ila wada dagaalameen!
Maalmo kadib, waxa ii timid walaashey Sarrah ayadoo iweydiinayso wixii aan shaaha ugu darey; inay jecleysatey ayey ii sheegtey oo ay hadana doonayso laakinse waan udiidey ilaa ay sixun ii baridey; lugaha ayey iga dhunkanayso- waa sida aan kusameeyo saaxibadey marka aan kadoonayo daroogada!
Inta aan uqalbi jelcay ayaan siiyey waxooga! Dhowr jeer oo kalana waan siiyey ilaa ay laqabsatey!
Xaaladii schoolka ayaa kasoo dartey ilaa aan ugu danbeyntii katagtey, dadkii guriga joogeyna waa lala yaabanyahey waxa gabadha kudhacay oo ay schoolka ugu hartey! Ugu danbeyntii waxay isku samirsiiyeen inay ‘gabari hadafkeeda noolashu uu yahey guur ee ay waxbarashudu muhiim aheyn!’
Rajadii ayaa uwareegtey dhanka walalkey iga yar madama aniga iyo walaashey kufashilmanay waxbarashada iyo rajadii nalaga qabay!
Maalin baas ayaa waxa iga dhamaatey sahaydii (daroogadii)! Waxan ushaxaad tagey mid kamid ah saaxibadey inuu wax isiiyo haseyeeshe wuu ii diidey ilaa in aan.…….! Magaranaysan waxa uu igu xirey? XASBIYALLAHU WA NICMAL WAKIIL! Wuxu ii shardiyey walaashey Sarrah ayuu raba inuu kasinaysto!
Waan kadiidey anigoo ladoodayo. Kooxdii kale ayaa nasoo kala dhex galay oo damcay inay nadhex dhexaadiyan ayagoo leh:
Halmar wax dhib ah kuma jiro, weydi ayada haddii ay raali katahey, maxa kudhibaya adiga….!
Haddii ay lasafteen ninkii, ayaan ku iri: Waxad aheyd qofkii uhoreeyey ee iibalan qaadey inad ila daaweyneyso markii aan daroogada….., maantana mawaxad codsanaysa inan kuu keeno, masidaasba saaxibtinimadeenii?
Inta qoslay ayuu iigu jawabay: Maxay tahey saaxibtinimada iyo daaweynta aad sheegeysid ninyahow! Iska hilman waxas ee…..!
Dood adag kadib, xariirkooda oo dhan ayan jirey.
Daabacaad: SomaliTalk.com | Dec 11, 2004